निर्वाचन आयोगले भन्यो-शान्तिपूर्ण मतदान जारी छ, २० प्रतिशत मत खस्यो
वैशाख३१ , काठमाडौं ।
पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत ३४ जिल्लामा उत्साहजनकरुपमा मतदान भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । २८३ स्थानीय तहमा मतदान गर्ने कार्यक्रम रहे पनि दुईवटा स्थानीय तहमा यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भइसेककाले २८१ स्थानीय तहमा मतदान हुँदैछ ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार अहिलेसम्म २० प्रतिशत मत खसेको छ ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ४ को लंकुस्थित लक्ष्मी माविमा बिहान ७ बजे मतदान गरे ।
निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १० स्थित प्रसूति गृहको क्वाटरमा रहेको मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजे पहिलो मतदाताको रुपमा मतदान गरे । आयुक्त सुधीरकुमार शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको धुम्बाराही माध्यमिक विद्यालयमा मतदान गरेका छन् ।
विना बाधा अवरोध सबै मतदान केन्द्रमा मतदान भइरहेको आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए ।